Jubbaland: Macalin Maxamed Balan-qaadkina waa ku Baqaylay.
By ibrahim Aden shire August 09, 2017
Wasiirka waxbarashada Jubbaland macalin Maxamed oo safar ku marayay gobalka Gedo ayaa soo gaaray magaalada Garbahaareey ee caasimada gobalka 4/8/2017. Horay wuxuu usoo maray magaalooyinka Luuq, Dolow iyo Balad-xaawo.
Ujeedada safarka wasiirka si cad looma qeexin. marki hore waxaa la sheegay inuu horudhac u yahay booqasho balaaran oo madaxeweyne Axmed madoobe gobalka u imaan doono. Laakiin marki danbe waxaa lagu soo koobay in wasiirka u kuur-galayo xaalada gobalka qaasatan tan wax barashada ee ah qaybta uu isagu masuulka ka yahay.
Wasiirka ayaa kala kulmay magaalada Garbahaareey soo dhaweyn aan horay loogu samayn madaxdii ka horaysay ee imaan jirtay dagmada dowladii dhexe ka dib. Maadaama hiigsiga Garbahaareey uu yahay inay noqoto xarunta cilimiga iyo wax barashada ee Jubbaland, waxaa sawiirka lagu soo dhaweeyay arday ubaxyo lulayso.
Soo dhaweynti ka dib, waxaa lagu soo wareejiyay madaarista, iskoolada iyo maktabadaha wax barashada ee magaalada ka jiro. waxaa la tusay wax dhiiri galiyo wasiir horay ooga gaabiyay shaqadiisi.
dhoola tuskaan ay soo bandhigtay Garbahareey ayaa looga dan lahaa in la tusso wasiirka inay dagmadu iskeed wax u qabsatay hadana ay u baahantahay qaybti ee mamulka ku lahayd iyo in taageerada loo fidyo aysan noqon doonin mid aanan laga faaidaysan.
Meeshi cir laga filayay ayay ciiryaamo ka timid
Nasiib darro, wasiirku kama hadal mushaarka macalimiinta, dhisidda fasalo cusub iyo soo kordhinta iskoolo hoose oo gobalku dhib weyn u qabo. kama hadal waxa uu ka qaban doono meelaha aysan dugsiyo sare ka jirin sida Balad-xaawo. ma sheegin waxa uu ka qaban doono caruurta iskoolada aan dhigan ee kumanaanka kor u dhaafay ee ku nool gobalka kuwasoo qatar ugu jiro inay ku biiraan koxaha hubaysan.
Hal fadhiga ku diiday istaaga kuma godlato
Maamulka Jubbaland hadda waa mid tabar daran. Sedexda gobal ee ka kooban yahay isuma gudbi karaan. Caasimadiisa waxaa haysto alshabab. Dhaqaale ahaan wax weyn mahayo isha kaliya ee wax kasoo galaan waa takadda Kismaayo oo aysan wax badan ka soo dagin wax ka dhoofana aysan jirin.
Sida aan xog hoose ku helay wasiirka safar ku yimid gobalka markuu baxayay in nooliga laga bixiyo ayay noqotay. Maamulka isaga oo muruq iyo maal ahaan martabadaas joogo xataa balanqaad laga waayay haduu wax helo siduu wax ku qaban doono shaki weyn ayaa ku jiro.
Waxa kaliya ee lagu tilmaami karo balanqaad waa inuu wasiirku yiri waxaan ka furi doonnaa dagmada Garbahaareey xarun lagu tababaro macalimiinta gobalka Gedo. Ogow maahan kuwa Jubbaland oo dhan ee gobalka Gedo kaliya. In wasiirku tibaajibinayay hanka dadka uu la hadlayay way dhici kartaa oo uu is lahaa haddii tan ay ku qancaan ookiyaale bir ah u xiro haddii ay kula fahmaana xisaabta dib oogu noqo. In intaasba wax weyn la tahayna waa suura gal. Kay tahayba wax la qaato lama imaan wasiirku.
Maamulka Jubbaland wuxuu ka koobanyahay sadex gobal (Jubbada dhexe, Jubbada hoose iyo Gedo). si la isgu dheeli tiro dhaqaalaha gobolada Jubbada dhexe waxaa la siiyay caasimadda maamulka (Bu'aale), Jubbada Hoose waxaa la siiyay caasimadda ganacsiga (kismaayo) halka Gedo aan laga dhigay "Bartire buuga kuma jiro".
waxaa muhiim ah in qaladkaan la saxo. wali waxaa jiro xarumo badan oo haddi gobalka laga furo abuuri lahaa fursado shaqooyin iyo ilo dhaqaale. halka uu hadda wasiirku yiri waxaan furay xarunta ku kooban macalimiinta Gedo haddi laga dhigo mid macalimiinta Jubbaland oo dhan faaiido badan ayay keeni kartaa. sidoo kale waxaa loo gaar yeeli karaa xarun cilmi baaris oo matasho maamulka oo dhan dhaqaalaheeduna isagu bixiyo, kuwa kale oo badana waa jiraan haddii maskax fiyow iyo dad lexejeclo leh ay u howl galaan.